China 2018 Vokatra Vaovao Solar Powered Mole Repactor Sonic Mouse repeller Pest Control Ultrasonic Mouse Repeller ho an'ny Farm Grassland factory sy mpanamboatra | Jinjiang
2018 Vokatra Vaovao Solar Powered Mole Repactor Sonic Mouse repeller Pest Control Ultrasonic Mouse Repeller ho an'ny Farm Grassland
Anaran'ny marika: forecum
Laharana modely: L828C
Anaran'ny vokatra: Sonic Mole Repactor
Toerana niandohana: Guangdong, Sina
Model Model: L828C
Ora fiasana: 40ora
Mode fanaraha-maso: ON / OFF
1 fonosana habe: 16.5 * 11.5 * 8.3cm
Haben'ny 2pack: 14.6 * 11.8 * 11.8cm
1 entana lanja: 210g
2pack lanja: 215g
Haavo: 8.6 santimetatra
Sakany: 4.4 santimetatra
Tontonana masoandro: 5.5V tontonana solar 120V 120mA
Karazana fanaraha-maso bibikely: ody
Kitapo tokana: 16.5X11.5X8 cm
Karazana fonosana: 11.5 * 8 * 16.5cm
Est. Fotoana (andro) 2 Hifampiraharahana
Ahoana ny fomba hialana amin'ny molotra, volom-borona, gopera ary bibikely hafa
Mangovitra ny mpamongotra sonika ary mamoaka pulsika sonika miditra amin'ny tany mba handotoana ny moles, ny gopher ary ny voles, izay jamba tokoa ary tena mora tohina amin'ny feo sy ny hovitrovitra, ary manery azy ireo hiala ny trano.
Fitaovana: ABS kilasy ambony
Sonic matetika: 400-1000Hz
Fandrakofana mahomby: 650m
Batterie azo averina voaorina: 3.7V / 1200mAh 18650
Rechargeable current: 100mA amin'ny 24ora
Fandoavana tanteraka ny andro fiasana 1 andro 3 andro.
Fandidiana sy fitandremana:
-Mora apetraka: Ampifandraiso ny plugs, atosiho moramora ny lohan-doha sy ny spike
-Fiorenana miasa ara-dalàna: Mihovotrovotra ny mpamongady ary mamoaka feo isaky ny 30 segondra aorian'ny nametrahana azy
-Fomba fanenomana: apetraho amin'ny faritra misy alàlan'ny tara-pahazavana ny mpamily, hamono ho azy izy io
-Tsy misy orana io vokatra io, saingy tsy tokony hidoboka ao anaty orana. Ny lohan-doha dia tokony hapetraka 10cm ambony avy amin'ny tany. Raha sendra orena na tondra-drano dia esory ny fanafody mandra-pialan'ny orana
-Ny toetra sy ny hakitroky ny tany dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny repeller, ka alohan'ny hametrahana azy dia zahao ny tany. Ny tany matevina dia mamela ny fandefasana feo tsara indrindra. Ny tany efa mivaingana, voatondraka na mihosin-drano dia hiteraka fantsona ratsy ity fitaovana ity.
1 x Mpanodina ny volan'ny masoandro
1 x Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa
1.Manao santionany maimaimpoana ve ianao?
Toy ny mahazatra dia ampangaina ny santionany ary halefa amin'ny fanangonana entana. Fa ho an'ny tahiry sasany, afaka manome anao santionany maimaim-poana izahay, tokony handoa ny vidin'ny fandefasana ianao.
2.Manaiky habetsaha kely ve ianao amin'ny filaharam-pitsarana?
Eny, isa kely ho an'ny kaomandy fitsapana koa no horaisina tsara. Manantena fa io no fiandohana tsara ho an'ny coopeartioin.
3. Ahoana ny ora fanateranao?
Miankina amin'ny qunatity anao izany, matetika 10-20 andro aorian'ny nahazoanao ny petra-bola.
4.Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
mazàna isika dia afaka manaiky 30% T / T mialoha, mandanjalanja amin'ny kopian'ny B / L. 2.L / C, Paypal, Western Union dia OK ho antsika ihany koa.
5.Manaiky ny famonosana boaty miloko ve ianao raha ambanin'ny MOQ ny habetsahany?
Marina tokoa, fa ny vidin'ny saram-panoratana dia tsy hampidirina amin'ny vidin'ny singa.
Teo aloha: 2018 US / EU Plug Portable anaty trano Elektronika Ultrasonic Mouse Rat Bug Insect Pest Repeller, Moka
Manaraka: Air Cleaner Revitalizer Portable Home Air Purifier Anion Ozone Air Purifier Miaraka amin'ny Filter for Hospital Office
Walmart Reporter Ultrasonia Walmart
Famokarana ozinina elektronika ultrasonic ...
Sweettreats Mamonjy angovo ultrasound amin'ny famonoana bibikely ...